NgoLwesithathu, ngoMashi 31, 2021 NgoLwesithathu, ngoMashi 31, 2021 Douglas Karr
NgeCodePen, ngikwazile ukwenza wonke umsebenzi odingekayo ukuze shicilela umshini wokubala Ngishumeke kusayithi. Ukudalwa okuningi kweCodePen kungumthombo womphakathi futhi ovulekile. Yizinto eziphilayo abanye abantu nomphakathi abangaxhumana nazo, kusuka enhliziyweni elula, ukushiya amazwana, ukwenza imfoloko nokuguqula izidingo zabo.
Nge-CodePen, ungashintsha umbono wakho uma ungathanda ukuthi amapani abe kwesobunxele, kwesokudla, noma ezansi njengoba usebenza… noma ubuke i-HTML kuthebhu entsha. Ukubukwa kohlangothi nohlangothi kusebenza kahle kakhulu ukuhlola izilungiselelo zakho zokuphendula ngoba ungalungisa usayizi wepaneli ebukekayo.
Ungahlela iskripthi sakho ngasinye sisebenze kumaPeni, uwahlanganise abe Amaphrojekthi (umhleli wamafayela amaningi), noma wakhe amaqoqo. Ngokuyisisekelo kuyisizinda sephothifoliyo esisebenzayo sekhodi engaphambili lapho ungalandela abanye ababhali, imfoloko yamanye amaphrojekthi abiwe esidlangalaleni awakho ukuze uguqule, futhi ufunde nokuthi ungazenza kanjani izinto ezimnandi ngokusebenzisa izinselelo.
Ungagcina njengeGitHub Gist, ukuthekelisa ngefayela le-zip, ngisho Shumeka ipeni ku-athikili enjengale:
Umphumela Wokuthengisa Obikezelwe Wokubuyekezwa Kwe-inthanethi by Douglas Karr (@nomfundo_m)
Ngingakukhuthaza ukuthi ubhalise. Uzobhaliselwa ku-imeyili yabo yamasonto onke futhi ungangeza nokuphakelayo kokuphakelayo kwakho kwe-RSS ukuze ubone amapeni asanda kushicilelwa. Futhi, uma uqala ukusesha noma ukuphequlula izibaya zomphakathi lapho, uzothola amaphrojekthi amahle kakhulu ... abasebenzisi banamakhono impela!
Landela Douglas Karr ku-Codepen
Uhlobo olukhokhelwayo, iCodePen Pro, lunikeza ithani lezici ezingeziwe zokusebenza okuthuthukisiwe noma amaqembu - kufaka phakathi ukusebenzisana, izinqubo, ukusingathwa kwempahla, ukubukwa kwangasese, kanye namaphrojekthi athunyelwe ngesizinda sakho noma isizinda sakho. Futhi-ke, iCodePen inikezela ngokugcina okuhle ngokuhlanganiswa kweGithub lapho iqembu lakho lonke lingasebenza khona. Uma ufuna ukuhlola ikhodi elula njengami, iCodePen iyithuluzi elibaluleke kakhulu.